Ball Valve Ngwa, Valve Bọọlụ, Valve Parts - Xinzhan
Ihe eji egwu mmiri na-ese n’elu mmiri pụtara mgbaaka oche abụọ maka nkwado bọọlụ na ụdị bọọlụ na-ese n’elu mmiri. Nhazi a na - eme ka bọl ahụ see n’elu mmiri ma ọ bụ kwaga n’okporo mgbaaka oche dị n’elu. Nke a imewe na-ruru eru maka obere size na ala nsogbu bọl valves.
Oghere valvụ bọọlụ nwere ike site nchara efere welded, ma ọ bụ jiri ọkpọkọ welded n'ime bọl. Oghere Na-adịghị Ọnụ dị oke ọnụ n'ihi na obere ígwè dị na ya, yana n'ogo buru ibu ọ ga-enye aka na ndụ oche ka mma n'ihi na ịdị arọ ya na-ebelata ibu oche metụtara ibu eccentric.
Bọọlụ Trunnion Valve
Trunnion valve bọọlụ nwere mgbatị ọzọ na ala iji dozie ọnọdụ nke bọọlụ ahụ. Ọ bụ ya mere bọl agaghị agagharị. A na-enweta bọọlụ ndị a dị nro yana oche oche e mere maka nnukwu okpomọkụ ma ọ bụ ọrụ cryogenic.
Wenzhou Xinzhan Valve Ball Co., Ltd. (XINZHAN) bụ onye nrụpụta emepụtara maka mmepe nkenke dị elu, teknụzụ dị elu na arụmọrụ ọtụtụ bọọlụ. Site na ike imepụta ihe okike siri ike, ahụmịhe njikwa imepụta ọtụtụ afọ, ọrụ nhazi na nyocha (Western Siemens CNC equipment-spherical grinder, machining center, spherical roundness measurement, three-dimensional coordinate instrument, etc.), XINZHAN emeriwo mmata na otuto sitere n'aka ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ.
Tụnyere nke Metzọ Szọ nke Stainles ...
1. Usoro mgbatị: Nke a bụ omenaala ...
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Apụta Ngwaahịa - Sitemap Ball valvụ Parts, bọọlụ N'ihi valves , L Valve Balls , L Type Valve Balls , 304 Na 304l valvụ Ball , V-Shaped Valve Balls Manufacturer ,